China HGM series isebenze ukungcangcazela amalahle feeder Ukwenziwa kunye Factory | Izixhobo zoLungiso lweChengxin
Umzimba ophambili wesixhobo sokuhambisa amalahle sokungcangcazela sitywinwe kwaye siqhagamshelene nokuvula okungaphantsi kwesisele. Uhlobo lwe-arch okanye imodeli yokukhupha ipleyiti kumatshini inxibelelana ngokuthe ngqo nezinto ezikumgqomo wesetyhula. Ukungcangcazela kweplate yokukhupha kuhanjiswe ngokufanelekileyo kwizinto ezigcinwe kwisisele. Amandla okushukuma aveliswe ngamandla ombane enza ukuba izinto zikhululeke kwaye ziwe. Imathiriyeli idluliselwa kwindawo yamalahle esezantsi ngemijelo ejikayo kumacala omabini esondli samalahle. Ukungcangcazela kwesitya samalahle kunye nendawo egobileyo eyilelwe ngokukodwa kwaye ibalwayo yenza umbandela ngoncedo lwegophe lokuphosa amandla ukuze kuqinisekiswe ukukhutshwa kwamalahle ngokukhawuleza nangokukhululekileyo kwento leyo, kwanamalahle anefoscosity ephezulu kunye nomxholo omkhulu wokufuma. Zimbini iintlobo zoyilo lomatshini: enye kukukhutshwa ngokuthe ngqo kwe-hydraulic ehambayo yasimahla, kwaye enye iluhlobo lokutshixa oluzenzekelayo. Le yangaphambili inokusetyenziswa ekusebenzeni kwezinto zokuqinisa ukufuma kunye nesixa esikhulu sokondla. Uhlobo oluzenzekelayo lokutshixa luyilo olungqongqo loyilo lobubanzi begophe elingaphezulu kunye nobukhulu bempahla: 200-1000MM irediyadi egoso, kunye nomgama omncinci phakathi kwegophe elingaphezulu eligudileyo kunye neplate yokuphambuka kwe-arch yi-150-80 Xa imoto iyeka ukungcangcazela, umbandela emgqomeni izaku tshixa ngokuzenzekelayo kwaye iyeke ukutyibilika, kwaye akukho mfuneko yokuseta isango.
Ukungcangcazela okumangalisayo ngumgaqo owothusayo. Lo matshini ubunjwe ukungcangcazela kweemoto, umkhombe, ifanele njalo njalo. Yamkela ubunzima obuphindwe kabini kufutshane nomgaqo wokuvakala, isebenzisa intwasahlobo yerabha ukucheba amandla, isebenza kakuhle, inika amandla afanayo kwaye akukho ngxolo, kwaye ivuselele amandla ombane wokuqhuba ukuqhuba umzimba we-groove ukuze ufumane ubungakanani obufunekayo bomgama. Ukuxhotyiswa ngesiguquli sokuhamba rhoqo kunye nepleyiti ehlengahlengiswayo ye-hydraulic, imveliso yamalahle inokuncitshiswa ukusuka kubuncinci ukuya kwi-120% yemveliso, ukuze kufezekiswe isantya esingalawulekiyo solawulo lokondla.
Olona phawu lukhulu kulo matshini kukuba unokutyisa ngokuthe ngqo xa kungekho kungcangcazela okunamandla, kwaye amandla okuphatha angonyuswa ngaphezulu kwe-20% xa ushukuma. Ngapha koko, xa izibuko lokukhutshwa libethelwa embindini webhanti, ibhanti akukho lula ukuphambuka, akukho luthuli, akukho kusasazeka kunye nefuthe lokumelana. Indlu yamalahle akukho lula ukuyivimba kunye ne-arch. Kukhuselekile, konga umbane, kuyasebenza, kunye nonikezelo olukhulu lwamalahle, ungcoliseko oluphantsi kunye nobomi benkonzo ende. Lixhotyiswe zokutshiza kunye isixhobo emzimbeni. Xa ukufuma kwemathiriyeli kukhulu, amanzi asemathiriyeli anokukhutshwa. Xa izinto zomile, isixhobo sokutshiza sinokusetyenziselwa ukutshiza izinto ezimanzi, ezinothuli olufanelekileyo kunye nesiphumo sokungabinothuli, esisixhobo sokhuselo lokusingqongileyo.
Ixabiso lokutya kwamalahle t / h
Egqithileyo Umxhasi we-Electromagnetic vibration feeder
Okulandelayo: K uthotho lokuphindaphinda kumxhasi wamalahle
Umtya wamalahle weCelt Belt
Umxhasi wamalahle we-Vibrating feeder kwimigodi
Isondli samalahle e-Impeller
K Uhlobo loMondli waMalahle
Ukubuyisa uMondli waMalahle
Ukulinganisa uMxhasi wamalahle